Express si Onye isi ala Yavaş nye ımụ akwụkwọ Mahadum Yıldırım Beyazıt | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraGwaa si Onye isi ala Yavaş nye ụmụ akwụkwọ mahadum Y Studentsldırım Beyazıt
11 / 11 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
Gwa ụmụ akwụkwọ nke Mahadum Beyazit
Gosiputa site n’aka Onye isi ala Yavaş nye ụmụ akwụkwọ Mahadum Yıldırım Beyazıt; Mansur Yavaş, onye isi obodo nke Ankara Obodo ukwu, gbakwụnyere ozi ọma ọzọ banyere ụmụ akwụkwọ nke isi obodo ahụ.
Onye isi ala Yavaş, onye na-eche maka mmefu ego ma na-eme ka ndụ ụmụ akwụkwọ na-amụ ihe mfe maka ndụ ha, nyere iwu ịhazigharị ahịrị nke 474 na-eje ozi n'etiti Mahadum Yıldırım Beyazıt (AYBÜ) -Saray-Ulus-Kızılay na-agụsi ike maka ụmụ akwụkwọ ahụ.
Site na atụmatụ ọhụrụ nke EGO General Directorate mere, a gbanwere usoro AYBÜ-Saray-Ulus-Kızılay ka ọ bụrụ ahịrị ogha ma na-abawanye ọnụ ọgụgụ ọrụ.
EGO KA EGO NYERE EGWU AKEDKỌ BUDR R EDBEDR R IMUPUTA
11 Dị ka ọnwa Nọmba Mọnde, ọnụ ọgụgụ ọrụ sitere na 41 ga-abawanye na 45 yana nọmba 474, nke ga-amalite ịrụ ọrụ dị ka ngosipụta, ga-enwekwa ike iji kaadị ndenye aha ụmụ akwụkwọ kwa ọnwa.
Ndị njem ga-eweta ụgbọ njem ọha na ụbọchị izu ga-enwe ike iburu ọrụ mbụ na 07.35 n'ụtụtụ na ọrụ ikpeazụ na 19.20 n'ihu ụlọ ọrụ azụmaahịa GAMA. Ọ ga-arụ ọrụ dị ka ahịrị awara awara, ọ ga-ebugharị ndị njem site na isi mmalite ọrụ ahụ ga-amalite site na AYBÜ na 11.20 n'ụtụtụ ma kwụsịrị na 18.20 na mgbede.
Ndị njem niile ga-enwe ike iru ụgbọ ala EGO ga-enwe ike iji ọrụ mkpọchi 10 gbadoro ụkwụ na nhazi ọhụrụ.
AKW SKWỌ SOUP Maka ụmụ akwụkwọ
Obodo Ankara nke Ankara, Mahadum Yildirim Beyazit n'ọnụ ụzọ nke 11 November 2019 na-eme mgbe nile na-amalite na Mọnde kwa ụbọchị, na-amalite site na ụmụ akwụkwọ nri nke 08.00'den ga-enye mahadum ahụ.
AKW SERKWỌ EGO NA-EBARA SITE AYBU
ỌROUR ỌR ST NA-EBURU N’ CBUSTA AKA GAMA
Yıldırım Beyazıt Mahadum-Çubuk Obodo Njikọ…
Ozi ọma nke ndị ụkọchukwu dị na Tamil na-agafe
Beyazıt Gedikpaşa Multi-Storey Car Park Emechie
Yıldırım University Beyazıt